Ukwabelana ngezeNtlalontle Martech Zone
NgeCawa, Oktobha 16, 2011 NgoLwesithathu, Oktobha 26, 2011 Douglas Karr
Ndibhalile nje malunga nokusebenzisa Ukwabelana ngokwasentlalweni kumaphepha akho okufika, ke ixesha lale infographic alinakuba ngcono. Amanani ayothusa ngendlela ezentlalo ezichaphazela ngayo ukubonakala kwegama lakho kwi-intanethi. Ngokungafaniyo namanye amajelo, sihlala sifumanisa ukuba ulwabelwano ngokwasentlalweni lithuba elihle lokusasaza igama kwiinethiwekhi ezifanelekileyo. Isabelo sentlalontle sidibanisa izibonelelo zegama lomlomo ukongeza kwi u kuvunywa.
Yongeza le inikezele ngale infographic, ikhupha amanani kwiziza ezingaphezu kwezigidi ezili-10 ezifikelela kubantu abayi-1.2 yezigidigidi ngaphezulu kweminyaka emi-5! Eyona nto iphambili ndiyithathayo lixesha lokwabelana nge-9: 30 AM. Njengoko usebenza ngesicwangciso sakho sokwabelana, unokufuna ukuthathela ingqalelo imimandla yexesha labaphulaphuli onqwenela ukufikelela kulo!
Yandisa iTrafiki ngokwandisa iiXesha lokuPapasha